"Rehefa manao zavatra ao anatin’ny finoana dia tanteraka foana na inona na inona sakana.... ", hoy ny Filoha Andry Rajoelina, raha nandray fitenenana izy nandritra ny fanatrehany ny Fankalazana ny Eokaristia tao Toamasina, ny faran’ny herinandro teo. 25 janvier 2021
Seminera zokiny tao Analamalotra. Hirefy 2175 m2 ny velaran’ny fotodrafitrasa. Hahazaka mpiofana 120 ny trano fatoriana ao an-toerana. Hanara-penitra ny fotodrafitrasa. Ankoatra ny toeram-piofanana hisy toerana fialamboly, fitsaboana sy fisakafoana ihany koa ny toerana. Nanatrika ny fitsofan-drano ny « Maison des Soeurs » toerana izay hitoeran’ireo Masera Relijozy hanampy amin’ny fitsaboana amin’ny ivon-toeram-pahasalamana ao Betainomby Toamasina ihany koa ny Filoham-pirenena. Notokanana ny faran’ny herinandro teo ihany koa io ivon-toerana io.
Hôpitaly katolika HCM « Le bon Samaritain »
Taorian’izany, niroso tamin’ny fitsofan-drano ny fototry ny akany « Foyer Filles- Mères » tao Betainomby ihany koa ny Filoham-pirenena sy ireo tompon’andraikitry ny Fiangonana Katolika. Toerana handraisana ireo zazavavy mitondra vohoka aloha loatra sy ireo reny sahirana ailiky ny fiarahamonina ity akany ity. Fitokanana izay notanterahina nialoha ny fametrahana ny vatofehizoro voalohany manamarika ny fananganana ny Hopitaly katolika voalohany eto Madagasikara – Hôpital Catholique de Madagascar - HCM « Le bon Samaritain » Hiantoka ny fanamboarana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ny Hopitaly ny Fitondram-panjakana. Haorina amin’ny velaran-tany 1. 468. 73 m2 ny fotodrafitrasa. Hisy rihana roa ny hopitaly. Hisy sampan-draharaha maro samihafa ny toy ny fitantanana, « services médicaux », « services Imageries », « Chirurgicaux », « Biologiques », « Rééducation », « services d’Urgences » sy « Restauration ».
Fandidiana famindrana voa
Hitondra fampitaovana raitra ho an’ny hopitaly koa ny Fanjakana toy ny « radiologie numérique » sy « scanner » araka ny fampantenana nataon’ny Filoha. Hampiavaka ny hopitaly ny hametrahana ny toeram-pandidiana famindrana voa na « transplantation rénale ». Tetikasa efa ela no novinavinain’ny Filoha noho ny hamaroan’ny marary mangataka ny hanokafana ny sampan-draharaha. Misy mihitsy ireo maty noho ny tsy fahafahana manaraka ny fitsaboana any ivelany. Ho azo tanterahina eto Madagasikara ity karazana fandidiana ity raha toa ka tsy maintsy natao tany ivelany toa an’ i Inde, hatramin’izao. Marobe ireo mila ny fandidiana ka antony nanaovan’ny Filoham-pirenena laharam-pahamehana manokana ity sampan-draharaha ity ao amin’ny hopitaly. Efa vonona ihany koa ireo manam-pahaizana vahiny hanome ny traikefany rehefa nifampiresaka tamin’ny Kardinaly. Mandray anjara lehibe amin’ny fampandrosoana ny Firenena ny Fiangonana Katolika amin’ny fanabeazana, ny fiahiana, fitsaboana sy fitaizana ara-panahy ka antony tsy nisalasalan’ny Filoha amin’ny fanomezana tanana ny Fiangonana.
Manolo-tanana ny Fiangonana
Nomarihin’ny Filoha ihany koa fa anisany manome tanana goavana ny Fiangonana Katolika amin’ny fitsaboana eto Madagasikara. Saika rantsa-mangaikan’ny Fiangonana ireo toeram-pitsaboana amin’ny toerana lavitra andriana eto Madagasikara. Mahakolo fotodrafitrasa ihany koa ny Katolika ka hipetraka ho fananana sy fotodrafitrasa azo lovain-jafy ny asa vita. Hanavotra ain’olona maro ny hopitaly rehefa tafatsangana. Isany noderain’ny Filoha manokana ny fahaiza-manaon’ny Fiangonana Katolika amin’ny fampitana fahalalana amin’ny tontolon’ny fampianarana. Anisany nanana mpianatra maro an’isa sangany tamin’ny fanadinam-panjakana Cepe, Bepc, Bakalorea farany teo, manerana ny Faritra 22 ny sekoly katolika ka isan’izany i Toamasina. Midika ho fahaizana mifehy mpianatra ny fahazoana voka-panadinana ambony.
Haino aman-jery katolika RTCM ao Androranga - Toamasina
Notokanana ny faran’ny herinandro teo koa ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara « Radio - Télé- catholique Masôva » - RTCM ao Androranga- Toamasina. Niforona tany amin’ny taona 2010 ny Radio Masôva ary izao lasa niova ho televiziona izao taty aoriana. Nitombo hatrany ny isan’ireo mpanaraka ny Radio Masôva, ka nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra hanitatra izany ho Televiziona. Efa tsy azo ihodivirana intsony koa ny televiziona, ka natao ho fanabeazana, fampitana vaovao marina sy ho fampiroboroboana ny fampielezana ny evanjely ny RTCM. Nanatrika ny fampahafantarana ny tetikasa ho fampandrosoana ny Fiangonana Katolika ihany koa ny Filoham-pirenena. Voakasik’izany ny fanabeazana, serasera, fahasalamana, fiahiana ny zon’olombelona sy fampandrosoana ara-tsosialy. "Isaky ny hariva ny tenako dia nampita ny fepetra rehetra tokony harahantsika rehetra mba hoentina miady sy hisorohana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus tany aloha tany.